चीनले लगायो अमेरिकी वाणिज्यमन्त्रीमाथि प्रतिबन्ध, अमेरिकाले भन्यो– ‘निरर्थक’ कदम
बीबीसी। चीनले अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री विल्बर रोसलगायत केही अमेरिक नागरिक माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। केही दिनअिघ अमेरिकाले हङकङस्थित केही चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जवाफमा चीनले आज अमेरिकीमन्त्री लगायतलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। चीनले यो घोषणा त्यो दिन गर्यो जुन दिन अमेरिकी उपविदेश मन्त्री वेन्डी शर्मन चीन भ्रमणको लाग जाँदै छिन्। बाइडेन प्रशासनले चीनको यो कदमलाई ‘निरर्थक’ र ‘निराशावादी’ कदम बताएको छ।
रुसलाई दिइने सैन्य सहयोगमा अल्झिए चीन–अमेरिका
रुसले चीनसँग सैन्य सहयोग मागेपछि अमेरिका र चीन एक आपसमा उल्झिएका छन् । यद्यपि रुसले चीनसँग कुनै सैन्य सहयोग नमागेको र युक्रेनमा अभियान चलाउन स्वयं सक्षम रहेको जनाएको हो । तर रुसको पक्षमा देखा पर्नु अगाडि अमेरिका र चीनबीच यो विषयमा बयान बाजी सुरु भएको छ ।अमेरिकाले युक्रेन–रुस युद्धमा रुसको सहयोगलाई लिएर चीनलाई कडा चेतावनी दिएको छ । यस विषयमा ग्लोबल टाइम्सका पूर्व सम्पादकले अमेरिकालाई नै सल्लाह दिएका छन् । फाइनान्सियल टाइम्स र न्यूयोर्क टाइम्समा चीनसँग सैन्य र आर्थिक सहयोग मागेको समाचार प्रक
एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीन आमनेसामने
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक दल विभाजित हुँदा विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीन आमनेसामने देखिएका छन्।पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा रहेका बेला दुई दलको भातृ संगठन वाईसीएल र युवा संगठन विरोधमा उत्रिएपछि प्रहरीले दमन गरेको थियो । साथै शुक्रबार एमसीसीको विरोध गर्ने कलङ्कीमा प्रेसर कुकर बम राखिएपछि अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै हिंसात्मक गतिविधि अमेरिकालाई मान्ने नहुने बतायो । अमेरिकी
नेपालमा अमेरिका-चीन खुलेआम टकराव
काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाल मामलामा अमेरिका र चीन खुलेआम टकरावमा उत्रिएका छन् । दुवै देशले एमसीसीबारे एक अर्कामाथि खुलेआम र विभिन्न माध्यमले आरोप लगाउन थालेका छन् । अमेरिकी राजदूतावासले आज सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको विषयमा वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित बहसको बलियो समर्थक भएपनि हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमको विचारहरु स्वीकार्य नहुने भन्दै चेतावनी दिएको […]
भारत-चीन-अमेरिका त्रिकोण : नेपालका लागि अभिशाप कि वरदान ?
भारत-चीन-अमेरिका रणनीतिक स्वार्थको त्रिकोणभित्र नेपाल रूपी जहाज हराउँछ भन्ने भाष्य सत्य हो कि बर्मूडा त्रिकोणबारे कुत्सेको दाबी झैं अतिशयोक्तिपूर्ण चर्चा मात्र ? यो 'हाइपोथेसिस' अब सम्परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
अमेरिका, चीन र रुसबीच 'हाइब्रिड' युद्ध !
तीन साताअघि अमेरिकाका सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जोइन्ट चीफ्स अफ स्टाफ जनरल मार्क मिल्लेले त्रिपक्षीय युद्धको कुरा झिकेका थिए । विश्वका तीन महाशक्तिहरू अमेरिका, रुस र चीन त्रिपक्षीय युद्धमा प्रवेश गर्न लागेको मिल्लेले बताए । मिल्लेको कुराले विश्व अब अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीयताबाट अघि बढेर त्रिध्रुवीयतामा प्रवेश गरेको पुष्टि गरेको छ । एकध्रुवीयताको अन्त्यका कारण तिलमिलाइरहेको अमेरिकाले नयाँ युद्धको बहाना खोजिरहेको मिल्लेको भनाइबाट संकेत पाइन्छ । तर मिल्लेले त्रिपक्षीय युद्ध भनेर परम्परागत युद्धलाई इंगित गरेका हुन् भने त्यसको स...
Lokaantar कार्तिक २०७८
जलवायु सहकार्यका लागि अमेरिका–चीन सहमत
काठमाडौं : विश्वका सबैभन्दा ठूला कार्बन उत्सर्जक गर्ने देश चीन र अमेरिका जलवायु सहकार्य बढाउन सहमति नजिक पुगेका छन्। दुई देश जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मिथेन उत्सर्जन कटौती, वनजंगल संरक्षण र कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा यो दशकभर सहकार्य गर्न सहमत भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२६ मा गरिएको संयुक्त घोषणामा चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयासहरु दोब्बर बनाउने सहमतिमा पुगको बताएका छन्।चीन र अमेरिकाले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तय
थाहा खबर आश्विन २०७८
दोस्रो शित यूद्धको कहरमा अमेरिका र चीन
संसार अहिले चीन र अमेरिकाको टकहराटले आक्रान्त देखिन्छ । सन् १९८९ देखि हेनरी किसिन्जर र निक्सनको पदचाप र सहानभूतिले गर्दा चीन र अमेरिकाको सामीप्यता र समधुरता वढेको थियो । भूमडलीकरण र खुला बजारलाई प्रचूर मात्रामा लाभ लिदै चीनले अमेरिका लगायत यूरोप, एसीया र अफ्रिकामा आप्mनो व्यापारीक कारोवार र सञ्चाल बढाउन सफल भयो । जनसंख्यीक लाभांष […] The post दोस्रो शित यूद्धको कहरमा अमेरिका र चीन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
टोकियो ओलम्पिकमा पदक तालिकामा जापान, अमेरिका र चीन अगाडि
काठमाडौं, १३ साउन । टोकियो ओलम्पिकमा आज २३ स्वर्णका लागि प्रतिष्पर्धा सुरु भएको छ । सुटिङ, स्विमिङ, डाइमिङ, साइक्लिङ, रोइङलगायतका खेलमा आज स्वर्णको प्रतिष्पर्धा सुरु भएको हो । ओलम्पिकको पाचौं दिनसम्म पदक तालिकामा जापान ११ स्वर्णसहित अगाडि छ । अमेरिका र चीन १०-१० स्वर्णसहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । यसपटकको ओलम्पिकमा अमेरिका र चीनबीच […]
कोरोना खोपले चीन र रूस विकासोन्मुख देशसँग नजिकिए, अमेरिका टाढियो
सीएनएन। कोरोना खोपका कारण चीन र रूस विकासोन्मुख देशसँग नजिएका छन् भने अमेरिका टाढिएको छ। अहिले अधिकांश देशमा चीन र रूसले खोप बिक्री तथा सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराइरहेको छ। अमेरिका भने आफ्नै देशका नागरिकलाई मात्र खोप लगाउन व्यस्त देखिएको छ। खोप उत्पादनमा चीन र रूस आपसमा मिलेका पनि छन्। रूसको स्पुतनिक-भी खोपको २६ करोड डोज चीनमा उत्पादन भइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि अमेरिका र चीन सहमत
५ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिका र चीन जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि अन्य मुलुकसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार भएका छन् । अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरी र चिनियाँ समकक्षी सिई जेन्हुआबीच भएको वार्तामा यस्तो सहमति जुटेको हो । वार्तापछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ […]